DHAW DHAWDU CADUUR UMAY DHICIN : DAWLADDA OO AAN QARWAAQSAN DHALIISH AY U SOO JEEDIYEEN GOLAHA WADDA TASHIGA OO MICIIN BIDAY ODAYAASHA IYO IGA BARIIJI‏ | Salaan Media
DHAW DHAWDU CADUUR UMAY DHICIN : DAWLADDA OO AAN QARWAAQSAN DHALIISH AY U SOO JEEDIYEEN GOLAHA WADDA TASHIGA OO MICIIN BIDAY ODAYAASHA IYO IGA BARIIJI‏
July 19, 2013 | Published by: Hamse
Salaan ka dib bay ii yara saamaxa muwaadininay in aan si barbardhigo dadka dawladda difaacaya iyo nin odaya oo ku nolaa 40 sanno ka hor tuuladda Toon. Ninkaas oo halkan aan ugu bixin doono Xoogsane
Tuulada Toon ee ku taal dhinaca Hawd ee Madaarka Hargeysa ayaa waxaa joogi jiray ninkaas Xoogsade. Dadka xoola dhaqatadda ah ee subaxdii yimaad tuuladda ninba waxbuu keena meheraddaha sida sibraar caanah, dhululubo subag ah, harag wixii la mid ah.
Ninkasta oo tuuladda wax keena si hoose ayuu meel ugu tiiriya isaga oo iska illaalinaya indhaha dadka badan, kii oo dareensinaya ninka maqaaxidda haysta waxaa uu meesha ku leexiyey taas oo ah bishishinka iyo habdhaqanka xoola dhaqatada markay tuulooyinka yimaadan. Iibka wixii tuuladda la keeno way iska go’aan tahay sida suuqyadda caalamka subax kasta oo baayadda laguma habsamo.
Ninkii odayga ahaa ee tuuladda joogay wax la kala macaashaayo lama socdo, wuxuu ku baraalugaba waa sawaxanka iyo shaaha u keen iyo nin is huba oo dagaalaya inanka maqaaxida oo shaahii farsama xumeeyey ama kala ragay. Inta badan dalab ka shaahu waa fartag xilli si fiican salka dhulka lagu hayo oo sula iyo seban hore laga sheekayo; waayahayda iyo jiibtuna ay isku baxayso oo aan farta taagan la dhaadayn. Ka dibna Shaahu waa agdhig iyo adeer yaa ii shubay ( hadda garoo waa kii farta ku dalbaday), jawaabta inanku ama minqaxwuhuna waa iska cab waa la darbee dabadeedna fiririqda iyo xiixda ayaa xigta. Mararka qaarba nin laysla yaqaan yidhaahdaa adeer saf marisa keen, ka dibna a jebadda ayaa xigta iyo hebelna haka reebin.
Isga Oday Xoogsade fartiisa wuu iska tagtaa, hadba sida hareerihiisa laga yidhaahna waa sameeya. Xilliga caraabaa la gaadho ee shax iyo sheekaba dhamaato ayaa raggii xoolaha ka yihid waxna u sii horeeyeen ay yidhaahdaan waar hebelow xisaabta ka jarow baaqiga isii. Oday Xoogsade ayaa darka yimaad isla soo taaga waar bal xisaabta ka jaroo baaqiga isii iyo oo maxaad Xoogsade keentay een ka yaraa, markaas buu isagoon dhegla qabto lahayn yidhaa war adyadda jooji yoo Toona ha xasaradayne baaqiga keen dadka miyanad arkayn.
Haddaba muwaadinoo sheekadaas Toon iyo Xoogsade s waxaa ka dhigan ninka inta uu meel soo fadhiisto ku tiraabaya dhaleecaynta Golaha waddatagiga iyo Toosinta Qaranka iyaddoo Goluhu dawladda uu soo hordhigay dhaliillo dhinacwalba ka soamaynaya qarannimadeena hadday tahay dastuurka lagu tuntay, xil gudashala’aanta iyo dan u xaglinta labadeena Gole, dhaliisha madaxweyna u gaarka ah iyo wiiqitaanka higsigeenii gooni isutaaga. Haddaba halkii laga sugaayey in dawladu wax ka qabato dhaliilaha horyaal ayey qaday jid khaladn iyada oo adeegsanaysa odayaal aan hoosba u dhugan dhaliilaha goluhu soo yeedhiyey, sidaa odayaasha ka hadlay Gabiilay, Bariga Hargeysa iyo Bariga Burco iyo dadkale oo kali horrad ah.
Waxaa iyagana hanqalka la kacay ciddii ay dhaliishu saarnayd sida labadda gole ee dartuuriga ah iyo golaha wasiiradda. Waxaa ay cuskaddana waa intii lagu dhallilayey oo ay leeyihiiin dalku dastuurbuu leeyahy, madaxweyne ayuu leeyahay. Waa run oo wuu layahay intaba laydinkamana baahna in aad ku celcelisaan ee dhaliisasha la sheegay saxeedda ka hadla ilayn leen falaadhi gilgilashu kuma ogdee. Haddii aad jidkaas ka ceel haysaan idinkaa Nuur iyo Naaleeyaga iskugu yeedhaaya,
Dawladda iyo Odayba haddaad taagan tihiin Golaha Wadatashigu dastuurkuu baalmarsan yahay ayaa dastuuri ka dhigay in la jebiyo oo laga gaabiyo Dartuurkii inoo dhignaa oo ay ka dhalatay in 16 qodob oo dhaliili ah laga dhexlay oo ah haku jirto ama ka jawaab!
Xalku maaha in laysla soo taago Toon ha xasaraddaynina iyo Nabadgelyadda Somaliland ayaad khalkhal gelinaysaan ee xalku waxaa weeye maxaad Dawlad yahay saxday ama saxaysaa ee xisaabta 16 qodob ah aanu ka saaraa si xaasilka togan lagugu bogaadiyo.
Mohamoud Aw Hassan Arrale